အရိုးအက်တာ သက်သာစေဖို့ - Hello Sayarwon
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင် နိုင်စေဖို့ဆိုရင် အရိုးတွေ သန်မာစေဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။ ဒီလို အရေးပါတဲ့ အရိုးတွေ မှာ မတော်တဆ ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင် နေ့စဉ် လှုပ်ရှားမှုမှာ တော်တော်လေး ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ အဖြစ်များတဲ့ အရိုး ကျန်းမာရေး ပြဿနာ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အရိုးအက်တာမျိုး ဖြစ်ခဲ့ရင် ဘယ်လို ကုသစောင့်ရှောက်မှုတွေ လုပ်ရမလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးပါရစေ။
အရိုးအက်တယ်ဆိုတာက အရိုးကျိုးတာလောက်အထိ မပြင်းထန်ပေမယ့် လှုပ်ရှားမှုလုပ်တဲ့အခါ တော်တော်လေး အခက်တွေ့စေနိုင်တဲ့ အရိုးထိခိုက်မှုပါ။ အရိုးအက်တယ်ဆိုတာက ပြင်းထန်တဲ့ ထိခိုက်မှု တစ်ခုခုကြောင့် အရိုးမှာ ကြီးကြီးမားမားထိခိုက်မှုဖြစ်တာမျိုးပါ။
အရိုးအက်တယ်ဆိုတာက trabeculae လို့ခေါ်တဲ့ အရိုးတွေကို ဆက်ပေးတဲ့ fibrous tissues တစ်ရှူးတွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်မိတာ ဒါမှမဟုတ် ပျက်စီဒတဲ့အခြေအနေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာပါ။ ဒီတစ်ရှူးတွေ အများအပြား ထိခိုက်ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ အရိုးကျိုးတာမျိုး အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘာတွေကများ အရိုးအက်တာကို ဖြစ်စေနိုင်လဲ………….
အရိုးအက်တာကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကတော့ အများ​ကြီးပါ။ နေ့စဉ် လှုပ်ရှားမှုတွေကနေစလို့ မတော်တဆ ထိခိုက်မှုတွေအထိ အမျိုးမျိုး ပါဝင်နေနိုင်ပါတယ်။
ကား၊ စက်ဘီး စတာတွေ တိုက်မိတာ
လေးလံတဲ့အရာတစ်ခုခု ပြုတ်ကျတာနဲ့ ထိမိတာ
အမြင့်က ခုန်ချတာတွေကြောင့် အရိုးအက်နိုင်ပါတယ်။
အရိုးအက်နေလား သိသာစေနိုင်တဲ့ လက္ခဏာတွေက ဘာတွေများလဲ…….
အရိုးအက်နေတဲ့အခါ ထိခိုက်မိတဲ့ နေရာတဝိုက်မှာ
အဆစ်က တင်းနေတာမျိုးတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အရိုးအက်တာ သက်သာစေမယ့် အိမ်တွင်းကုထုံး
အရိုးအက်တဲ့ နေရာကို ခပ်မြင့်မြင့်လေးထားပေးပါ – အရိုးအက်တဲ့အခါ ထိခိုက်မိတဲ့နေရာမှာ သွေးတွေ စုမနေစေဖို့ ထိခိုက်မိထားတဲ့နေရာကို စောင်ထူထူလေး ဒါမှမဟုတ် ခေါင်းအုံးလေးခုလို့ ခပ်မြင့်မြင့်လေး ထားပေးပါ။
အနားယူပါ – ထိခိုက်မိတဲ့အခါ လှုပ်ရှားမှုမလုပ်ဘဲ အေးအေးဆေးဆေးအနားယူပါ။ ဒါက မြန်မြန်သက်သာစေဖို့ အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာပါ။ ဒဏ်မဖြစ်စေဖို့လည်း အကောင်းဆုံး အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မှာပါ။
ရေခဲဝတ်ကပ်ပါ – ထိခိုက်မိတဲ့နေရာကို ရေခဲဝတ်ကပ်ပေးတာက အနာကို သက်သာစေသလို ရောင်ရမ်းမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။
အထိန်းဝတ်ပါ – ထိခိုက်မိတဲ့နေရာကို ဒူးစွပ်၊ ခြေချင်းဝတ် အထိန်းတို့လိုမျိုး ခပ်ကျပ်ကျပ်လေး ထိန်းထားပေးနိုင်မယ့် အရာတစ်ခုခုနဲ့ စည်းထားပေးပါ။ အရမ်းမကျပ်စေဖို့နဲ့ အရမ်းချောင်မနေစေဖို့ သတိထားပေးပါ။ လှုပ်ရှားတဲ့အခါ ထိခိုက်မိနိုင်ခြေ နည်းစေဖို့ပါ။
ဆရာဝန်နဲ့ပြသပါ – ဆရာဝန်နဲ့ပြသပြီး ဓာတ်မှန်ရိုက်တာကစလို့ လိုအပ်တဲ့ ကုသမှုတွေ ခံယူပေးပါ။
အာဟာရပြည့်ဝအောင် စားပါ – အရိုးအက်တဲ့အခါ သက်သာစေဖို့ဆိုရင် အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ သစ်သီး၊ နို့ နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကို စားပေးပါ။
အယ်လ်ကိုဟော နဲ့ ဆေးလိပ်ရှောင်ပါ – အရိုးအက်တာ သက်သာစေဖို့အတွက် အယ်လ်ကိုဟော နဲ့ ဆေးလိပ်ကို လုံးဝမသုံးစွဲပါနဲ့။
အရိုးအက်တာက သိပ်မပြင်းထန်ရင် ၃ ပတ်လောက်အတွင်းမှာ သက်သာသွားနိုင်ပေမယ့် အရမ်းပြင်းထန်မယ်ဆိုရင်တော့ နှစ်နဲ့ချီပြီး ကြာနိုင်ပါတယ်။
How to HealaBone Bruise Naturally https://draxe.com/health/bone-bruise/ Accessed Date 20 April 2020
Everything you need to know about bone bruise https://www.medicalnewstoday.com/articles/314427 Accessed Date 20 April 2020